नेपाल आज | विश्वयुद्ध लडेका ९५ वर्षे योद्धा, भक्कानिदै भन्छन्– उपद्रोले मुलुक विनास भो (भिडियोसहित)
समाचार प्रोफाइल कभर स्टोरी
विश्वयुद्ध लडेका ९५ वर्षे योद्धा, भक्कानिदै भन्छन्– उपद्रोले मुलुक विनास भो (भिडियोसहित)
काठमाडौं । मध्यबानेश्वर पश्चिमतर्फ महादेवस्थानमार्गको बायाँतिर हरियो गेट । गेटभित्र हरियो रङकै पर्खाल छिचोलेपछि आफू उल्टोतिरबाट पसेँ कि जस्तो भान हुन्छ । घरको बनोट नै यस्तो छ कि पहिला आँगन नभएर मझेरीसंग भेट हुन्छ । ६ दशकअघि बनेको यो घरको छानोले इतिहासको एउटा मूर्धन्य पात्र ओत लाएर राखेको छ । ती हुन– दोस्रो विश्वयुद्धका जीवित योद्धा मेजर त्रिलोकसिंह थापा क्षेत्री । उमेर शताब्दी पुग्न पाँच वर्ष बाँकी छ । भोगाईको हिसाव गर्ने हो भने नामजस्तै अनुभव र अनुभूतिका तीनवटै लोक चाहारिसके जस्तो लाग्छ । उनले राणा, राजा, बहुदल, गणतन्त्र सवै राजनीतिक स्वाद भोगे ।
त्यतिमात्र हैन, निरंकुश देशमा जनताको आवाज बुलन्द गर्ने स्वतन्त्रताको लडाईंमा चिराग भएर हतियार उठाए । विश्व राजनीति बुझे । विडम्बना, उमेर शताब्दीको घेरो छुन खोज्दा आफ्नै देश बुझ्न सकेनन् । माटोको सुगन्ध बुझ्छन् , नेताहरुको व्याख्या बुझ्दैनन् । भाषण बुझ्छन् , जनताले रासन नपाउनुको अर्थ बुझ्दैनन् । आफूले दुख पाएको भन्दा पनि नयाँपुस्ताको जीवन असुरक्षित हुँदै गएको भविष्यले ऐंठन गर्छ । आफूलाई ढाड्स दिँदै आएकी पत्नीले पनि एक वर्षअघि छोडेर गएपछि यी सबै अन्धकारबाट पार पाउन दुई पेग चिरिप्प लाउँछन र भोलिको उज्यालो पर्खन्छन् । आखिर सास रहेसम्म बचाउने त त्यही आस नै त हो ।
लोकतन्त्रको जननी बेलायती सेनाका मेजर थापा दैनिकी लोभलाग्दो छ । विहानै उठ्छन् । यथाशक्य कसरत गर्छन् । हिँडडुल गर्ने जोश त छ तर शरीरले साथ नदिँदा त्यो रहरमा पूर्णविराम लगाएका छन् । पत्रपत्रिका पढ्न कुनै छुटाउँदैनन् । राजनीति गर्दैनन, भलीभाँती राजनीति बुझ्छ् । चिनेका लेखकको लेख पढेर तत्काल प्रतिक्रिया जनाउँछन् । परिवारका अधिकांश सदस्य विदेशमा छन् । एक्लो भएकोमा उनलाई कुनै दुख छैन । यसलाई उनी आआफ्नो प्रारब्ध भनेर बुझ्छन् । नयाँ पात पुरानो पातसंग झर्न बनेको हुन्न भन्ने तथ्यसंग थापा परिचित छन् ।
मेजर थापा फौजी परिवारमा जन्मिएका हुन् । भारतमा अंग्रेजहरुको शासनकै बेला उनको जन्म भारतको मिजोरममा भएको थियो । उनका बुबा प्रथम विश्वयुद्धमा अफ्रिकामा जर्मनीविरुद्ध युद्ध लडे । बाजे पनि सैनिक नै थिए । छोटो समयमा सुवेदार जमदार भएपछि उनकै ‘ब्याची’को झोसपोलमा बाबुको जागिर गएछ । त्रिलोक सात वर्षको हुँदा बुबाले भएको सम्पत्ति जुवामा स्वाहा बनाए । आमा र उनलाई मावलीमा छाडेर उनी दुनियाँको भीडमा हराए ।
सात वर्षसम्म मामाघरको रुखासुख्खा खाए । मान, अपमान, भुक्तमान एकसाथ व्यहोरे । उनी १४ वर्ष पुग्दानपुग्दै पृथ्वीको अर्को भूगोलमा दुई शक्तिशाली मुलुक मुठभेड गर्दै थिए । सन १९३९ सेप्टेम्बर १ मा जर्मनीले पोल्याण्डमाथि गरेको आक्रमणको प्रभाव १४ वर्षका यी किशोरसम्म पर्‍यो । पाँच कक्षाको परीक्षा दिएर उनी सेनामा जागिर खान नजिकैको भर्ती केन्द्र पुगे । मेडिकलमा फिट भएपछि उनलाई सेनामा लिइयो ।
त्यो बेला अंग्रेजहरुलाई बढीभन्दा बढी सैनिक चाहिएको थियो । धेरै जसो देशले युद्धको तयारी गरिरहेका थिए । मामाघरको पेलाई र आमाको दुःख देखेर उनले सेनामा हाम्फाल्ने निर्णय लिएका थिए । लडाकुको पोसाक, माथिसम्म आउने छालाका बुट बजार्दै मामाघर आइपुग्दा उनकी आमा रोइन् । गोर्खेलौरी लगाउने मामाका छोरा जिल्ल परे । आमालाई सम्झाउदै उनले भने, ‘छोरा भएर जन्मेपछि इलम गर्न जानु पर्छ । किन रुनु ?’ यसो भन्दै आमाको आँसु भावनाले नभई कर्मले पुछ्ने कसम खाए ।
कसरी भयो रंगून कब्जा ?
सिलाङमा सैनिकको आधारभूत तालिम भइरहेको थियो । युद्ध चर्किदै जान थाल्यो । ब्रम्हपुत्र नदीपूर्वको इलाकालाई ‘वार जोन’ घोषणा गरियो । त्यहाँको बटालियनलाई पाकिस्तानी क्वेटामा सार्ने तयारी अंग्रेज प्रशासनले गर्‍यो । सिलाङबाट क्वेटा जानुअघि त्रिलोकलाई बिदा गर्न मामाघरबाट जेठा मामा आए । उनका आँखामा आँशु टिल्पिलाएका थिए । शीरमा मुसार्दै आशिर्वाद दिए । उनी फर्केर आउँछन् कि वीरगति प्राप्त गर्छन्, टुंगो थिएन ।
सन् १९४१ को नोभेम्बरसम्म थापा ब्याची धेरैजसो तालिम सम्पन्न भइसकेको थियो । उनको बटालियनले पूर्वी बर्मामा जापानीसँग भिड्न जानुपर्ने भयो ।
गोर्खा रेजिमेन्टमा सिपाही खुकुरी बोक्ने भएका कारण अरु रेजिमेन्टका भन्दा भिन्न थिए । गोर्खालीहरुले खुकुरी झिकेपछि रगतको बली नदिई दापभित्र राख्दैनन् भन्ने प्रोपोगण्डा फैल्याइएको थियो । जापानीले रंगून कब्जा गरेका थिए । जापानको समर्थनपछि जर्मनी, इटली समूहको मनोबल उच्च भएको थियो । अमेरिकाले बेलायत, फ्रान्स, पोल्याण्डलाई समर्थन गरेपछि युद्धको दिशा बदलिएको थियो । बर्माको पश्चिमी क्षेत्र बुथिडाङबाट अक्याबतर्फ अगाडि बढ्यो । जापानी सेना बुथिडाङबाट पछाडि हटिसकेको थियो । बुथिडाङदेखि रंगूनसम्मको ठूलो क्षेत्र कब्जा गर्न त्रिलोकको बटालिनय अगाडि बढिरहेको थियो । जापानी सेना देखा परेनन् । रंगूनसम्म पुग्दा पनि जापानी नभेटिएपछि सहर कब्जा भयो । तर जापानीले किन बर्मा छाडे भन्ने स्पष्ट भएन । जापानी सेनाका लागि बन्दोबस्तीका सामान बोकेर आएका दुई वटा विशाल जहाजलाई अमेरिकाले चीनको सीमामा खोलिदिएछ । जसका कारण जापानी सेना गोलाबारुद, रासन, सैन्य बलको भरथेग नपाउँदा रंगून छाडेर जान बाध्य भएको रहेछ ।
त्रिलोक इतिहासका अनेक मोडका साक्षी भए । भारत–पाकिस्तान विभाजनका दृश्य यिनको मानसपटलमा ताजै छ । इन्डोनेशिया युद्ध, सिंगापुर स्वतन्त्रता संग्राम, मारिया हरटोग दंगा, जाभा फ्रन्टका कथाकहानी आदि इत्यादि ।
विक्रम सम्वत २००८ सालमा काठमाडौं आइपुग्दा त्रिलोक सिंह थापा क्षेत्री २४–२५ वर्षका थिए । रक्सौलसम्म उनी रेलमा आए । त्यहाँबाट हेटौंडासम्म बसमा आए । चन्द्रागिरी डाँडो हुँदै केही दिनको यात्रा सकेर काठमाडौं खाल्डो आइपुगेका थिए । काठमाडौंको मौसम लोभलाग्दो थियो । शरद ऋतुको याममा न चिसो न जाडोको मिश्रित मौसम थियो । महान चाड दशैं नेपालीहरुको घरआँगनमा प्रवेश गरिसकेको थियो ।
राजा त्रिभुवनले त्यो बेला देशमा शासन गर्थे । दशैंको टीकाको दिन राजाको हातको टीका थाप्न लामो लाइन लाग्ने गथ्र्यो । आफ्नो मातृभूमि आएको बेला राजा त्रिभुवनको हातको टीका थाप्ने उनमा पनि इच्छा जाग्यो । थ्री पिस सुटमा उनी राजाको हातको टीका थाप्न वसन्तपुर पुगे । राजा वरिपरि भएकाहरुले टीका थापिसक्ने बित्तिकै कठालोमा समातेर पर पुर्याउँदा रहेछन् । अशिक्षा, अचेतनाको भुमरीमा परेको मुलुकका शासकको कानमा कुनै रैतीले भारदारको पोल लगाइदेलान कि भन्ने डर उनीहरुमा हुँदो रहेछ । राजाले आफ्नाविरुद्ध कुनै पनि कुरा नसुनून् भनेर जनता र राजाबीच दूरी उनीहरुले कायम गरेका रहेछन् । त्यो त्यस्तो युग थियो, जुन बेला मानिसहरु कानुनी हिसाबमै जातका आधारमा तल्लो र माथिल्लो मानिन्थे । जातभात स्वीकृत थियो । अहिले दलित भनिनेहरुले त्यो बेला ब्राम्हण, क्षेत्रीलाई छुन पाउँदैन थिए ।
त्यस्तो युगका राजा, भारदार र जनताको चेतनाको स्तरको धेरै वर्णन गरिहन परेन । बेलायती सेनामा ३३ वर्ष बिताएपछि त्रिलोक मेजरबाट अवकाश पाए । अहिलेका मेजरले त्यो बेला राजाको हातको टीका थाप्न त गए । तर टीका नलगाई फर्के । भारदारहरुको त्यो शैली उनलाई फिटिक्कै मन परेन । बेलायती सेनामा जागिरे छँदैको कुरा थियो त्यो । बेलायती शासकको शैली देखे, भोगेका त्रिलोकलाई त्यसपछि राजाको हातको टीका लगाउने इच्छा कहिले जागेन । तर उनी नेपालमा राजा भएको मन पराउने व्यक्ति हुन् । उनको जीवनकालले चार राजा भोग्यो । पृथ्वीवीर विक्रम शाहको निधन भएको ११ वर्षपछि त्रिलोकको जन्म भएको थियो ।
पाँच सन्तानका पिता त्रिलोकका सात नातिनातिना र एक पनाति पनि छन् । ती मध्ये एक छोरी र एक छोरा उनीसँग छन् । मूलतः कान्छी छोरीले उनको ख्याल गर्छिन् । उनका समकालीन कोही पनि छैनन् यस धर्तीमा । न स्कुलका, न सेनाका न राष्ट्रसंघमा काम गर्दाका । ती सबै नभएर पनि उनलाई फरक परेको थिएन । पत्नी नहुँदाको एक्लोपनसँग अहिले उनी डराएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धमा रंगून कब्जा गर्न जाने बेलायती सेनाका यी योद्धा अहिले आफ्नै शून्यतासँग साक्षात्कार गर्न हच्किरहेका छन् ।
एक शताब्दी पुग्न लागेका यि इतिहास पुरुषले दीर्घजीवि हुने सूत्र पनि बताए । उनको पहिलो सूत्र हो – सधै राम्रो भावना मात्रै मनमा राख्नू । अर्थात सकारात्मक सोच । सत्य बोल्नु र अरुको कुभलो कहिल्यै नसोच्नू । बाँकी खानपान र जीवनशैली हो । त्रिलोकका बाजे अफ्रिकामा युद्ध लडेका थिए । उनका पिताजी पनि पल्टनमै थिए । एक किशिमले भन्ने हो भने उनको खान्दान नै फौजी हो । पछिल्लो पुस्ता भने अलि फरक भएको छ । उनका दुई छोरा लन्डन बस्छन् । एक छोरा उनी नजिकै छन् ।
त्रिलोक सिंह थापा क्षेत्रीले यति लामो जीवनकालमा नदेखेका, नभोगेका विषय धेरै कम छन् । उनको आफ्नै आत्मवृत्तान्त ‘जीवनको गोरेटोमा’ २०६१ सालमा प्रकाशित भयो । आत्मवृत्तान्तमा उनले युद्धमा सामेल भएको, सिंगापुरको पोस्टिङ, लण्डन घुमफिरदेखि अनेकन आयामहरु उल्लेख गरेका छन् । नियमित पत्रपत्रिका पढ्छन् । देशको समसामयिक विषयमा अपडेट रहन्छन् । बाँधेको गाईगोरुले दाम्लो चुँडाउन पाउँदा उफ्रिने, बुकुर्सी मार्ने, आफ्नै खुट्टा भाँच्ने जस्तो उपद्रो गर्छन् । त्यस्तै उपद्रो नेपालको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा मानिसले गरिरहेको थापाको बुझाइ छ । सिंहदरबारका पुराना सवारी साधनहरु मन्त्रीहरुले नै लगेको खबर पढेर उनी आश्चर्यचकित भए । देशलाई माया गर्नेहरुले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दैनन् भन्ने उनी ठान्छन् ।
दरिद्रताका कारण समाजमा अहिले पनि प्रत्यक्ष\_अप्रत्यक्ष महिलाको व्यापार भइरहेको थापा बताउँछन् । भन्छन्, ‘बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिकाको प्रकरणमा एउटा सिपाहीले ठाउँको ठाउँ जति भन्यो त्यति धरौटी बुझाएर रिहा भएको देखिन्छ । कहाँबाट आउँछ मानिससँग अपत्यारिलो धन ?’ मेजर थापा नेपालमा पनि एक प्रकारको ‘क्यापिटल पनिस्मेन्ट’को व्यवस्था हुनु पर्ने ठान्छन् । उनी भन्छन्,‘बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको माग सडकमा त उठेको छ । तर त्यो हदसम्म होइन, दुई चार कोर्रा हान्ने व्यवस्था हुँदा ठीक हुन्छ कि भन्ने लाग्छ ।’
जीवनको यो मोडमा त्रिलोकसँग बाँकी खास कामना छैन । जीवनका पुराना पन्ना पल्टाउँदा, आमाले मावलीमा वचन सहनु पर्दाका क्षणहरु सम्झिँदा उनी भावुक हुन्छन् । जीवन भावनाहरुकै संगालो त हो, कहिले आँशु कहिले हाँसो । दुःखका पल सम्झिरहन मानिसले सक्दैन । सम्झिनु पनि हुँदैन ।
पहिलो भेटमा छुटेका कुराहरु भन्न मन लागेछ उनलाई । मेरो मोबाइलमा उनको ल्याण्डलाईनको रिङ बज्यो । मैले फोन उठाएँ । उताबाट त्रिलोक बोले, ‘हेल्लो मिस्टर रिजाल । क्यान यु कम वन्स एट माइ होम ? आइ निड टु से समथिङ द्याट आइ मिस्ड इन एन इन्टरभ्यु ।’
यति लामो आयु लिएर आएका मान्छेले चुरोट छाडेको त थाहा पाइसकेका थिएँ । रक्सी चाहिँ खाएछन् कि खाएनन् होला जीवनमा ? यो खुल्दुली लागि रहेको थियो । युवा बेलामै छोरीको फाटेको जामा देखेपछि चुरोट छाडेका रहेछन् । रक्सी त किन छाड्थे ? उनले भने, ‘पहिले त आधा बोतलसम्म खान्थे । अहिले शरिरले सहँदैन । दुई पेग ह्विस्की लिन्छु । हरेक दिन । नित्य । नबिराई ।’